Zvii Zvandinofanira Kuziva Nezvokutumira Mameseji? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mongolian Myanmar Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Urhobo Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
:-) Kana ukazviita nouchenjeri kutumirana mameseji kunogona kubatsira kuti ugare uchiziva kuti zvii zviri kuitika kune vamwe.
:-( Ukasangwarira mamwe mameseji anogona kukanganisa ushamwari hwako kana kuti mukurumbira wako.
Nyaya ino ichakuudza zvaunofanira kuziva nezve
Munhu waunotumira mameseji
Zvaunonyora pakutumira mameseji
Zvimwe zvichataurwawo munyaya ino ndeizvi:
Mazano pakutumira mameseji
Mibvunzo ine chokuita nokutumira mameseji
Vechiduku vakawanda vanoona sokuti hapana imwe nzira yavangakurukura nevamwe kunze kwokutumirana mameseji. Unokwanisa kutumira mameseji kune chero munhu waunoda ari mufoni yako kunze kwekunge vabereki vako vakurambidza.
“Baba vangu havazvifariri ini nemunin’ina wangu patinotaura nevakomana. Kana kuri kuti tinoda kutaura nemunhu wechikomana, tinofanira kuzviita tichishandisa foni yemumba munotandarira vanhu, vamwe vanhu varipo.”—Lenore.
Zvaunofanira kuziva: Kana ukapa nhamba yako yefoni kumunhu wose wose, unogona kuzvipinza mudambudziko.
“Kana ukapa munhu wose wose nhamba yefoni yako unogona kutumirwa mameseji kana kuti mapikicha ausingafariri.”—Scott.
“Kana uri musikana ukagara uchitumirana mameseji nomukomana, zviri nyore kuti unzwe wava kuda munhu iyeye. Ndizvo zvinogona kuitika kunyange uri mukomana kana ukagara uchitumirana nemusikana.”—Steven.
Bhaibheri rinoti: “ Munhu ane njere anoona dambudziko ovanda. ” (Zvirevo 22:3) Unogona kuzvidzivirira pamatambudziko akawanda kana ukashandisa uchenjeri pakutumira mameseji.
Nyaya yakanyatsoitika: “ Ndaishamwaridzana nomumwe mukomana, uye taigara tichitumirana mameseji. Ndaingoti tingori shamwari. Handina kuona chakaipa nokushamwaridzana kwataiita kusvikira musi waakandiudza kuti anondida. Ndakazopatika, ndokuona kuti ndakanga ndisingafaniri kunge ndakapedza nguva yakawanda ndichitaura uye ndichitumirana naye mameseji, sezvandaiita. ”—Melinda.
Funga nezveizvi: Unofunga kuti ushamwari hwavo hwaizomira sei Melinda paakaziva zvaifungwa nomukomana uyu?
Nyorazve nyaya iyi! Zvii zvaigona kunge zvakaitwa naMelinda kuitira kuti iye nemukomana uyu vangoramba vari shamwari?
Hazvina kumbooma kutumira mameseji uye kutumirwa mameseji kunonakidza. Asi zviri nyore kukanganwa kuti vanhu vanonzwisisa zvakasiyana-siyana mameseji avanenge vatumirwa.
Zvaunofanira kuziva: Munhu anenge atumirwa meseji anogona kunzwisisa zvakatosiyana nezviri kufungwa nemunhu atumira meseji yacho.
“Pameseji haugoni kuona manzwiro emunhu uye kuti ari kutaura sei. Izvozvo zvinogona kuita kuti vanhu vasanzwisisana.”—Briana.
“Ndinoziva vasikana vakakanganisa mukurumbira wavo uye vanozivikanwa nokuita senge vari kuda munhu nemhaka yemameseji avanenge vatumira vakomana.”—Laura.
Bhaibheri rinoti: “ Vanhu vakarurama vanofunga vasati vapindura. ” (Zvirevo 15:28, Good News Translation) Chidzidzo parugwaro urwu ndechipi? Verenga zvakare meseji yako usati waitumira!
Unogona kuzvipa mitemo pakutumira mameseji.
Zvaunofanira kuziva: Kana ukasangwarira mashoko aunoshandisa pakutumira kwaunoita mameseji ako, unogona kuita zvinogumbura vamwe zvoita kuti upedzisire usisina shamwari.
“Zviri nyore kukanganwa mitemo yaunozvipa pakutumira mameseji. Pandinenge ndichitaura nemumwe munhu kana kuti tichidya ndinogona kubva ndatumira munhu wandiinaye meseji.”—Allison.
“Zvine ngozi kunyora meseji iwe uchityaira. Kana ziso rikangobva mumugwagwa, unogona kuita tsaona.”—Anne.
Bhaibheri rinoti: “ Chinhu chimwe nechimwe chine nguva yakatarwa, . . . nguva yokunyarara nenguva yokutaura. ” (Muparidzi 3:1, 7) Mashoko ari murugwaro urwu haangoshandi pakutaura, anoshandawo pakutumira mameseji!
;-) Teerera zvaunoudzwa nevabereki vako.—VaKorose 3:20.
;-) Haikona kungopa munhu wose wose nhamba dzako dzefoni. Kuramba kwaunoita zvakanakanaka kuudza munhu wose wose zvinhu zvine chokuita noupenyu hwako kusanganisira nhamba dzako dzefoni, chiratidzo chokuti uri kuva neunyanzvi hunozokubatsira kana wakura.
;-) Usanyanya kujairana nemunhu zvokuti unobva wamutumira mameseji anoratidza senge unomuda. Kana ukanzwa mwoyo wako wava kuda munhu iyeye, kazhinji kacho ndiwe ucharwadziwa uye uchaodzwa mwoyo.
“Vabereki vangu vava kundivimba pamashandisiro andinoita foni yangu, saka kana iri nyaya yokuti ndiani wandichaisa mufoni mangu vanoziva kuti ndichazviita nokuchenjera.”—Briana.
;-) Usati watanga kunyora meseji yako, tanga wazvibvunza kuti, ‘Ndinofanira kuita zvokutumira meseji here?’ Zvingava zvakanaka kuti uite zvokufona kana kutozotaura nemunhu wacho.
;-) Pakunyora meseji usanyora mashoko okuti unozonyara kuataura kana maonana nemunhu wacho. “ Kana zvauri kuda kunyora zvisingaiti kuzvitaura, usatumira meseji yacho, ” anodaro Sarah ane makore 23.
“Kana mumwe munhu akakutumira mifananidzo inonyadzisa, udza vabereki vako. Kuita izvozvo kuchakudzivirira uye zvichaitawo kuti vabereki vako vavimbe newe.”—Sirvan.
;-) Gara wazviudza nguva dzaunoti dzikakwana haushandisi foni. “ Handigari nefoni yangu pandinenge ndichidya kana kuti pandinenge ndichidzidza, ” anodaro musikana anonzi Olivia. “ Ndinoidzima nguva yemisangano yechiKristu kuitira kuti ndisazopindwa nemuedzo wokuda kuitarisa. ”
;-) Funga zvinodiwawo nevamwe. (VaFiripi 2:4) Usanyora meseji paunenge uchitaura nemumwe munhu.
“Ndakazvipa mutemo wokuti handitumiri meseji kana ndiine vamwe kunze kwekuti zvakakodzera kuti ndidaro. Chimwewo ndechokuti handipi munhu nhamba dzangu dzefoni nemhaka yokungoti ndinomuziva.”—Janelly.
Wanga uchidanana nemumwe munhu kwemwedzi mitanhatu, asi iye zvino uri kuona kuti munhu wacho handiye chaiye waunonyatsoda. Ungamutumira meseji yokuti kudii?
“Ndinoda kuti tizokurukura. Tingazoonana riini?”
Mhinduro yakarurama: B. Kukurukura nyaya iyi inokosha yokuti urambane nemunhu wacho chiso nechiso ndiko kwakanakisisa kunze kwokunge pane zvikonzero zvine musoro zvingakutadzisa kuonana naye.—Ruka 6:31.
Unogamuchira meseji ine mufananidzo wemunhu waunodzidza naye asina kupfeka. Ndezvipi zvakanakisisa kuita?
Kudzima mufananidzo wacho nokukurumidza.
Kutumirawo mufananidzo wacho kushamwari dzako dzose.
Mhinduro yakarurama: A. Mameseji ezvinhu zvinonyadzisira anozvidzisa munhu atumira uye atumirwa wacho. Ramba kubatanidzwa munyaya idzodzo!—VaEfeso 5:3, 4.
Uri kumba uye muri kudya wobva wanzwa foni yako ichirira kuratidza kuti mapinda meseji. Ndechipi chakanakisisa kuita?
Kutarisa meseji yacho uye woita sokunge kuti vamwe havanei nezvauri kuita.
Kumirira kusvika mapedza kudya wozoverenga meseji yacho.
Mhinduro yakarurama: B. Unogona kuzoverenga meseji pava paya. Remekedza vauri kudya navo.—VaFiripi 1:10.
Zvinotaurwa Nevechiduku Nezvemafoni